Ukusuka kwi-i3Geo kunye nezixhobo zeSoftware kaRhulumente zaseBrazil ezingama-57-iGeofumadas
NgoJulayi, 2012 GvSIG, ezintsha
Namhlanje lufikile iindaba lokuhlanganisa yemigudu phakathi i3Geo kunye gvSIG, isihloko kubonakala kum isigqibo ebalulekileyo gvSIG Foundation nangona uyazi ukuba japan nzima obubonakalayo nawuphi na umsebenzi kuthatha iinyanga qhinga yocwangciso jikelele.
Ezinye iisayithi ziya kuthetha ngayo kwaye siya kwazi ngakumbi ngakumbi ngabantu abangabasebenzisi; Ngoku ndifuna ukuchukumisa ifuthe lesi sivumelwano kuba i3Geo ayinakaziwa kwabaninzi kwimeko ye-Hispanic, nangona kunjalo sisixhobo esinye semvelaphi yaseLatin American enokuninzi okunokufaka isandla kwinkqubo yendalo yezicelo eziphuhliswe kwisoftware yasimahla ye-geospatial. Kwakhona eli candelo lenqaku kukubonisa ubungakanani bezixhobo zasimahla eBrazil.
Kutheni i-i3Geo ekhethekileyo?
Ukusuka kwindawo yokujonga ubuchwephesha, i3Geo sesinye isixhobo, esithi ngowama-2006 sibe lilayisensi ye-GPL, nesakhono sokudibanisa idatha phantsi kwemigangatho ye-OGC, zombini ngokubonisana nokuhlela. Kunika umdla kakhulu ukuba ungafunda iiprojekthi ze-gvSIG ezisebenza njengesicelo sedesktop ukwenza iimephu eziza kupapashwa kwi-Intanethi.
Kodwa ukubaluleka kwe-i3Geo ngumxholo wayo. Imvelaphi yayo: iBrazil.
IBrazil imele indawo yophuhliso kule minyaka imbalwa izayo kwimeko yeLatin American, kunye nebhulorho yeqhinga nePortugal neSpain. IMexico, eyenye ipali kwiLatin America, ayiphumezi umxholo wokudibana noMbindi Merika kunye neCaribbean njengoko kufanelekile; Ke ngoko, lo mmandla uyaqhubeka nokujonga emazantsi njengenye indlela yolwazi lokusebenzisana, njengoko sele kubonakala ePanama naseCosta Rica. Into eyenziweyo yiGuatemala ibinomdla, nangona isasilela ekusebenziseni ubunkokheli obunokubakho, konke ngenxa yobuthathaka obukhulu beMexico obubangelwa kukuzibaxa wedwa kwesoftware yokuthengisa (ekwabizwa ngokuba yisoftware yorhwebo).
Ubuhle obukhulu beBrazil bulo kulwimi, kuba nangona lufana neSpeyin, ukusebenzisana kwazo nezinye iilwimi kuninzi ngesiNgesi, okudala umqobo kwiindawo zalo eMzantsi Melika. Ngoko, sibona i3Geo njengomnyango wokuqala oza kuzisa ubuninzi beBrazil ephuhlise ngaphaya komxholo we-geospatial; kufuneka ubone uluhlu lwamathuluzi e-free ezamahala apho ndifingqa kwinqaku ukuba ndive ngathi luhlobo lokuphelelwa lithemba kuba kuwo wonke amazwe aseMerika kukho iiprojekthi ezichitha imali yesilivere ukwenza izinto ezisekho kakade kunye nokusetyenziswa kwamahhala.
Isibambiso kunye neBrazil sithetha ngolwimi, ndiyabambelela.
Kungenxa yoko le nto i3Geo ibalulekile, kuba idibanisa iinzame zekhowuni esemazantsi ukudibanisa amacebo ophuhliso oluzinzileyo ngakumbi. Ngokuchasene ngokupheleleyo namanyathelo avela emantla apho iBhanki yeHlabathi okanye i-IDB izisa iiprojekthi zala maxesha ezineempawu zesoftware esele zibotshiwe, ezingalunganga kwaphela kodwa ezingazinzisiyo kumazwe apho ukuhlawula i-600,000 yeedola ngonyaka kwilayisensi ye-Oracle kusisithuko intlupheko kunye nokungazi malunga nezenzo ezimbi kulawulo lukarhulumente ezitshintsha ngesantya solawulo lwezopolitiko.
Siyazi ukuba ikamva lesoftware yasimahla ilele ekubonakaliseni ukuba iyanceda abantu, kunciphisa inkcitho yoluntu engeyomfuneko. Ewe, i-Ecuador ithi ayifani neBrazil eyitshoyo. Kungenxa yoko le nto kubonakala ngathi inyathelo elincinci kodwa elibalulekileyo elidibanisa iinzame ezingekho ngaphantsi kwelinye lamazwe ama-5 enza BRICS Ngendlela enkulu edlalwa ngayo ekugcineni ukungalingani kuqoqosho lwehlabathi. Kwaye eli nyathelo lidibanisa umxholo we-Ibero-American ... ukuba konke kungcono kuba kwi-European Union kukho ukungqinelana ngakumbi kunye novelwano ngesoftware yasimahla.
Ewe, sifanele silindele iindaba ezilungileyo kunye ezingcono.
I-gvSIG yakhelwe kwiJava, ulwimi olufanayo neGeoServer. Ngale nyathelo, i-gvSIG yenza indlela esondeleyo yeMapServer, elinye iqonga lokushicilela idatha elikufutshane kakhulu ne-Quantum GIS ngezizathu zeqonga. Nangona i-Ofisi yoMphathiswa Wezendalo iphumelele nge-i3Geo iya phambili ngakumbi xa isiza kupapasha idatha yewebhu.
Ngokomxholo wethu, sinokukwazi ngakumbi malunga ne-i3Geo engayenzayo, ngesiSpeyin, nakwizintlu zokusabalalisa kwe-gvSIG.
Kodwa sikholelwa ukuba olu manyano lunokuvula indawo yokunxibelelana okukhulu kunye nezixhobo ezakhiwe ngabantu baseBrazil, kwaye simahla ukuba zisetyenziswe. Ukuya kwinqanaba apho iinzame zomthombo ovulekileyo zithintela ukuphindwaphindwa, siya kufumana uzinzo olukhulu, kwaye ndiyakholelwa ukuba kwindalo iphela emelwe zizigidi ezili-192 zabemi baseBrazil kukho amandla amakhulu. Ewe kunjalo, iBrazil inyanzelekile ukuphuma ukudibana kwaye ibonakala ngakumbi xa ifuna ukuziqinisa njengokuba ipolisi yophuhliso ibonisa; into esiyikholelwayo kwenzeka sele sele
Kwimigqaliselo kamva isiseko seGvSIG mhlawumbi sicinga ngeMexico, nangona kwimbono yam kufuneka ibone iGuatemala kuba kukho into ebonwa kuyo.
Isampulu ndizishiya ezinye izixhobo zomthombo ezivulekileyo ezinazo iBrazil, kubandakanya nenani labasebenzisi ukuza kuthi ga ngoku. Abanye bagcina igama labo loqobo, abanye banoguqulelo olubi kwisiSpanish kunye nokuzama ukwahlulahlula kwiindawo ezifanelekileyo:
Ulawulo lweeMithombo yeNdalo
GGAS (Amalungu e-517)
INkqubo yoLawulo Gas Natural Trading System, ijolise ngokubanzi ukujongana neemfuno ezendeleyo kwindawo yorhwebo yenkampani nonikezelo lwerhasi yendalo kwaye ivumela ulawulo lweerekhodi, umlinganiselo, izivumelwano, kwamatyala, ukuqokelelwa ingeniso, ukongezelela ekunikezeni idatha yokudibanisa neengxelo zemali, ezemali, ezisebenza kunye nezolawulo.
Gsan (Amalungu e-3287)
Ulawulo oluhlangeneyo lweenkonzo zokuncedisa ucoceko. I-Gsan idalwe ukuphakamisa izinga lokwenziwa komsebenzi kunye nokusebenza kakuhle kwamashishini okuhambisa amanzi kunye nokuthuthwa kwamanzi okuhambisa amanzi, kwaye iyakwazi ukulungiswa kumancinci, phakathi kunye nakakhulu.
I3GEO (Amalungu e-9747)
I-I3GEO yinkqubo esekwe kwi-Intanethi yokushicilela idatha ye-geospatial, ngakumbi kwiiMephuerver. Eyona njongo iphambili kukubonelela ngedatha yendawo kunye neseti yezixhobo zokuhambisa, isizukulwana sohlalutyo, ukutshintshiselana kunye nokuveliswa kweemephu kwiimfuno ... ngendlela, iqhawe lale movie.
Ulawulo lweRhafu, iCadastre kunye noLawulo loMasipala
Isixeko samahhala (Amalungu e-7802)
ISixeko samahhala sisisombululo kuphela sokulawulwa koomasipala esisebenzisa iingcamango eziphambili ezihambelana neCadastre yobuGcisa (Multi-Purpose Technical Cadastre) kunye ne-GIS yabasebenzi. Ukuba i-Free Software yenziwe phantsi kwesikhokelo esakhiweyo kwizigaba ezintathu (i-MVC), inokulungiswa ngokukhawuleza kunoma yiphi imfuno entsha.
Sago-Vula inkqubo emanyeneyo yolawulo (Amalungu e-4369)
I-SAGU isisombululo samahhala esenzelwe ukusiza amaziko ukulawula ulawulo lwabo. Ukusebenza kwayo kumodyuli, unikeza abalawuli isethi yezixhobo ezidibeneyo kunye nokuphucula iinkqubo zamacandelo ahlukeneyo eziko.
I-Note (Amalungu e-5053)
I-Inqaku yinkqubo yekhompyutha yokukhutshwa kweevoyisi zeenkonzo zecomputer, ukulungiswa koLawulo lweRhafu ye-ISS / ISSQN.
e-ISS (Amalungu e-2403)
I-ISS yinkqubo yekhompyutha ejolise ekuphuculwa koLawulo lweRhafu. I-IS-ISS yaphuhliswa ukwenzela ukuncedisa i-ISS yentlawulo yeSixeko, kunye nokusebenzisana nomhlawuli-ntlawulo kunye nomenzi weenkonzo ze-ISS.
I-CMS-uLawulo lweBrand (Amalungu e-1001)
Uphuhliswe nguMasipala waseBagé, inkqubo yenziwe kwimiba yokugcina nokusingatha iingxaki ezibangelwa ziirekhodi zomzimba.
e-City (Amalungu e-8954)
I-e-City iklanyelwe ukwenza icomputer ulawulo lweedolophu zaseBrazil ngendlela edibeneyo. Oku kuthetha ukuhlanganiswa phakathi kwamashishini kamasipala: iHolo yeSixeko, iNtlukodolophu kaMasipala, amagunya asekuhlaleni, iziseko kunye nabanye.
Geplanes (Amalungu e-7460)
I-Geplanes isicwangciso solawulo lwenkqubo eyenzelwe iinkampani zikarhulumente okanye ezizimeleyo. Isetyenziswe ekulungiseleleni ucwangciso lobuchule kunye nokusetyenziswa kwezenzo. Ngokusebenzisa i-Geplanes ungakwazi ukulawula imilinganiselo, iinjongo kunye nemiphumo yazo, izikhombisi kunye nezimo eziphazamisayo. Ngeengxelo, iirafu kunye nabaqondisi bepaneli yokulawula, abaququzeleli, abalawuli kunye nabaongameli banombono wezalathisi kunye neziko.
ULwazi lwezoLwazi kwiJikelele
Koruja (Amalungu e-7122)
Le projekthi yavela ngenxa yemfuno yamashishini karhulumente kunye nebucala ukulawula, ukulawula, ukulawula nokucwangcisa uphicotho kwiindawo ze-IT ukusuka kwindlela enye. Kulo mbono kuvela imbono yokudala indlela yokuqokelela izitoreji zezinto zobuchwepheshe (amaseva, ii-routers, switches, worksstations, njl.).
Sisau-Sac-Contra (Amalungu e-5677)
I-software yenkonzo yomthengi, ii-portals zenkqubo yolawulo kunye nokulawula ukufikelela.
EMS (Amalungu e-7885)
Nge-EMS ungayilawula imigca kunye nenkonzo yokusasazwa kuzo zonke iintlobo zeenkampani okanye imibutho ebonelela ngeenkonzo zabathengi kubantu.
Jaguar (Amalungu e-2455)
Jaguar bubume Java EE inika software bokwakha eliphezulu-level, esebenza kunye andisiweyo, ezisekelwe phezu ekudibaniseni abaninzi izakhiwo ezisisiseko ezisebenza an iziphumo MVC2 architecture OO kumxube kunye kwinqanaba eliphezulu nomda, kancinane Ikhowudi yeJava kunye nokusetyenziswa kwezixhobo ezifana ne-COI, i-DI kunye ne-AOP, ngendlela engokwemvelo kunye ehambelanayo.
I-CAU - iziko labasebenzisi beenkonzo (Amalungu e-2013)
It waphuhliswa Embratur ukuba ingongoma enye lwemisebenzi zenkxaso yolawulo IT kunye yomsebenzisi, ngokufanelekileyo iinkqubo zokusebenza, ukubonelela izinto elubala, kunye nokuvumela bonke abachaphazelekayo babe nolwazi olululo neenkqubo elandelwa kwiindawo zomsebenzi .
OASIS (Amalungu e-8524)
I-OASIS ivumela ukubeka iliso ngezenzo ze-IT kunye neenethiwekhi zekhomputha, iinkcukacha, ukuPasa, ukuPhathwa kweeNkqubo kunye neeSayithi, phakathi kwabanye.
MDArte (Amalungu e-2049)
I-MDArte ijolise ukudala ibhenkethi entsha kwi-software yoluntu, ukusetyenziswa kobuchwepheshe bwanamhlanje, okunciphisa iindleko ezipheleleyo zeenkonzo zeteknoloji yolwazi, kunye nokuxhomekeka kwizicwangciso zobunini.
I sihloko (Amalungu e-11.806)
Umlawuli wendalo wenethiwekhi.
Tití (Amalungu e-2585)
I-Tití ilawula zonke iziteshi ze-GNU / Linux. Ngaloo unokwenza izikripthi (iskripthi ngolwimi lwekhompyutheni) ukulungisa ulwazi, ukuzenzela nokuqokelela ngendlela ephakathi. Ngokusebenzisa namabala, uyakwazi ukuchaza umda epheleleyo okanye kwinxenye isicelo red.Su liye landa kwemveliso Serpro Experience Centres (nezakhiwo ezinxulumene Superintendency of Information Technology, i kobuchwepheshe ukuhlangabezana nemfuno kwi-ICT kunye nenkxaso kwiindawo zengingqi)
PW3270 (Amalungu e-3716)
I-pw3270 yi-emulator yokuphela kwe-3270, kunye nemisebenzi ephambili kunye ne-interface elula ukuyisebenzisa (i-GTK ilungile), xa kuthelekiswa nezixhobo ezisetyenziswa kakhulu kwiimarike.
GNUteca (Amalungu e-5585)
I-GNUteca yinkqubo yokuzenzekelayo zonke iinkqubo kwilayibrari, kungakhathaliseki ubungakanani beqoqo okanye inani labasebenzisi. Inkqubo yenziwe ngokuhambelana neendlela eziqinisekisiweyo eziphuhliswe liqela lala mathala eencwadi kwaye zaphuhliswa ngokusekelwe kwiimvavanyo zethala leencwadi.
Brazil Provinha (Amalungu e-1763)
Brazil Provinha, wadala ngokuhambelana injongo Development Plan of Education (PDE) UMphathiswa wePhondo, uvavanyo diagnostic usebenza kubafundi ababhalise 2 th unyaka wesikolo samabanga aphantsi. Oku kunceda ootitshala nabaphathi bezikolo, kuba wenza njengesixhobo zokuxilonga kwinqanaba lokufunda nokubhala kwabafundi, sivumele ukulungisa kwakhona yokufunda-ekufundeni nasekubhaleni, ukuphucula umgangatho wolwazi lokufunda nokubhala kunye Ukufunda nokubhala kwangaphambili kubonelela abantwana.
SAELE (Amalungu e-1315)
I-SAELE iye yaphuhliswa yi-UFRGS, ukwenzela ukuba unikezele le nkonzo ebalulekileyo kwiyunivesithi.
IBhanki yeTalente (Amalungu e-4675)
I-Talent Bank iye yaphuhliswa ukuze kubabela elo iitalente Chamber of yamaSekela uze uchonge izakhono zabasebenzi beli ziko, ukuze kube lula ngokutsha okokoko chavelela ezisebenzayo, ngokunikwa kwengcaciso enikwa abancedisi ngamnye.
REDECA (Amalungu e-1182)
I-REDECA isofthiwe eyenzelwe ukunceda ekubunjweni kwintanethi yoluntu ukukhusela abantwana kunye nentsha. Isekelwe ekuhanjisweni nasekutshintshisweni kolwazi kwimeko yolondolozo lwengcaciso, kunye nesantya soqhagamshelwano phakathi kwabadlali kumnatha. Igama layo livela kumazwi e-NETWORK kunye ne-CEPA (iSigxina soMntwana kunye ne-Adolescent).
I-Educar (Amalungu e-14,336)
I-i-Education yi-software yolawulo lwesikolo. Ubeka ingcaciso kwinkqubo yesikolo yasendaweni, okunciphisa isidingo sokusetyenziswa kwamaphepha, ukuphindaphinda kwamaxwebhu, inkonzo yesikhathi sabantu kunye nokucwangcisa umsebenzi wamaziko karhulumente.
Amadeus (Amalungu e-6071)
Inkqubo yoLawulo lokuFundiswa kweeNkalo zokuFunda ngokusekelwe kumxholo wokufunda odibeneyo
Kite (Amalungu e-5042)
I-GNU Kite / Linux lulwabiwo lwezemfundo olwenziwe ngo-2006 ingakumbi abantwana, abakwishumi elivisayo nakwizikolo zaphambi kokufunda, kwiinkulisa nakwizikolo zaseprayimari. Injongo yayo kukwenza iilebhu zekhompyuter indawo yokhuseleko, ukonwaba kunye nokufunda, kunye nemidlalo emininzi kunye neenkqubo ezisebenzisa ingqondo ngaphandle kokuphulukana nolonwabo lokufunda.
Peacock (Amalungu e-635)
Yisasazwa esekelwe kwiDebian GNU / Linux yesizwe ukusetyenziswa kwi-telecentres eBrazil.
I-Proinfo (Amalungu e-7804)
Inkqubo yemfundo ebanga.
LeMfundo yeLinux (Amalungu e-5612)
I-Linux yeMfundo yisisombululo sesofthiwe esinceda ekuphunyezweni kweenjongo zeProtefo ukuxhasa umsebenzisi wokugqibela ekusebenziseni nasekufikeleleni kwabo, kunye noxanduva lwebhubhoratri malunga nokugcinwa nokuhlaziywa.
EducatuX (Amalungu e-4185)
I-EducatuX yindlela yokufundisa eyenzelwe ngenjongo yokukhuthaza ukuhlanganiswa kwezifundo phakathi kweekhomputer kunye nemfundo nge software ekhululekile. Injongo yale projekthi yokwakhiwa kwezixhobo zootitshala kunye nabafundi besikolo esiprayimari ukunceda ekuhlanganiseni iteknoloji eklasini.
Ulawulo kwiiNkonzo zikaRhulumente
Curupira (Amalungu e-7574)
Ivumela ulawulo lweenkqubo zokunyathelisa ngokulawulwa kakuhle kweendleko eziphezulu, ukunyathelisa umthamo, ukubonelela, iimvume kunye nokusetyenziswa okusebenzayo kumanethiwekhi enkampani.
Fila (Amalungu e-6174)
Iprojekthi kunye neenkqubo zeekhompyutha eziphuhliswe ngu-Oktiva zolawulo lweenkonzo zoluntu.
Inkqubo yoLawulo lweebango (Amalungu e-14.824)
I-DGS iye yaphuhliswa ngaphakathi kwefilosofi yesofthiwe ekhululekile ukuhlangabezana neemfuno ze-IT, ukuguqulwa kweemfuno zeeprojekthi zangaphakathi ezilawulwa yiofisi yeprojekthi, oko kuphucula umgangatho karhulumente wenkonzo. Nangona kunjalo, ngenxa yokuguquguquka kwayo, isixhobo singasetyenziselwa nayiphi na indawo, i-arhente karhulumente okanye inkampani enqwenela ukulawula kakuhle iimfuno zabo.
IP PBX SNEP (Amalungu e-3215)
I-software yoqwalaselo yeenkonzo yePBX PBX.
Apoena (Amalungu e-3221)
U-Apoena yi-software ekhululekile ephuma kwiimfuneko zokuququzelela intando yeninzi yee-telecentres ngolwazi kwiBhanki yaseBrazil. Isixhobo sivelisa izicatshulwa zogcino. Isebenza njenge-arhente yeendaba eqokelela kunye nokucwangcisa ulwazi ukusuka kwimithombo yolwazi ye-300.
FPS (Amalungu e-5265)
Ukulungiswa kolawulo lweenqwelo zithuthi zikamasipala kuwo onke amaziko karhulumente, kwindawo ekhethekileyo.
ERP5 BR (Amalungu e-8733)
I-ERP5 isisombululo se-BR se-Integrated Management Systems (ERP) esinika ukukhanya, ukuguquguquka nokuguquguquka kwabasebenzisi bayo. Ukusebenzisa iindlela zoshishino (templates) ezikhoyo namhlanje, ERP5 ibandakanya iinkalo of accounting, ubudlelwane nomthengi, urhwebo, ulawulo yokugcina, ukuthuthwa, ngokwezikhkelo, ulawulo lwemicimbi yabasebenzi, uyilo lwemveliso, imveliso, ulawulo yeeprojekthi, phakathi kwamanye amaninzi.
System Ombudsman (Amalungu e-986)
Le nkqubo, uphuhlise iqonga web kuqinisekisa nokumelana kunye kwezoqoqosho kunye nobugcisa kwi-Ombudsman, esivumela kunikezelo iingxelo zolawulo enika iinkcukacha kwidatha esidityanisiweyo ze uvumele ukusetyenziswa kwayo yi ombudsmen ngeendlela ezahlukeneyo. Ngokusetyenziswa kweNkqubo ye-Ombudsman, isikhungo singenza ukuxilongwa nokuhlaziywa kweziganeko ezifunyenweyo kunye nokubonelela ngolwazi kubemi kulo msebenzi.
InVesalius (Amalungu e-5905)
I-InVesalius iyisofthiwe yezempilo kawonkewonke ejolise ekuncedeni ukuxilongwa nokucwangciswa kocwangco. Ukususela imifanekiso emacala-mabini (2D) ezifunyenwe yi-CT okanye MRI, inkqubo evumela ngokwenza iimodeli virtual imilinganiso emithathu (3D) nezakhiwo yokwakheka ehambelana kwizigulane phantsi ukhathalelo.
GP-Web (Amalungu e-6980)
Ulawulo lweprojekthi kunye nezenzo zolawulo
Cacic (Amalungu e-34.798)
Isoftware yokuqala kaRhulumente yoRhulumente waseburhulumenteni njengoko isiphumo seConsortium yeNtsebenzo phakathi kwe-SLTI - Ulwazi loLwazi lweTekhnoloji yeSebe loMphathiswa Wezocwangciso, uhlahlo-lwabiwo mali nolawulo -MOP kunye ne-DATAPREV-Itekhnoloji yoLwazi kunye neeNkampani zoKhuseleko loLuntu, ephuhliswa ngu I-Ofisi ye-DIVAPREV ye-Ofisi yoMoya oyiNgcwele.
Ukusasazwa kweziyobisi ngokwahluka- I-DIM (Amalungu e-769)
Isofthiwe ye-DIM yazalwa ngokuswela isixhobo sokulawula ukusasazwa kwamachiza oomasipala abanabantu abangaphezu kwesigidi abemi kunye nomyinge we-20.000 ngemini yokuhamba. Ukulawulwa komsebenzi kwinqanaba ngalinye kunye nokusebenza kwamachiza afumanekayo kwizigulane kunye nokuchongwa okukhethiweyo kwesigulane ngasinye, ngaloo ndlela kuqinisekisa ukulandelelana kwabo.
I-SPED-Inkqubo ye-Elektroniki yeNkqubo (Amalungu e-15.049)
I-System ye-Electronic Document Protocol (SPED) yenkqubo ye-WEB eyavela kwiimfuneko zokudibanisa ulawulo, ngokutshintshana ngamaxwebhu angaphakathi nangaphandle avela kwimibutho yemikhosi ye-Army. Ukususela kule mfuneko kufuneka inkqubo yenziwe yi-Army ukulawula amaxwebhu enkqubo.
Multimedia kunye neWebhu
Minuano (Amalungu e-4460)
I-Minuano-Ukudluliselwa kweaudiyo nevidiyo NGOKUFANELE isoftware yasimahla, yinkqubo yokubamba, ukuqhuba, ukupakisha kunye nokusasaza isiginali yedijithali ye-intranet okanye i-Intanethi, ukuhambisa bukhoma okanye ukhuphele.
I-LightBase-Umbhalo we-GED okanye isisombululo seDatabase seMultimedia. (Amalungu e-5209)
Isisombululo se-LightBase sisiseko sedatha kwaye indawo yokuphuhlisa i-multimedia idibanisa iseva yesicelo esheshayo kunye nokufundwa kwetekisi yesithathu, evumela ukufikelela ngokukhawuleza kunoma yiphi inkcazelo kwisiseko sedatha.
Xemelê (Amalungu e-5465)
Eli qela lifuna ukwabelana ngesisombululo sokukhuthaza iinkqubo zokunxibelelana kunye nentsebenziswano kwinkqubo ye-Intanethi. Sithetha ngezixhobo zokulawula iiwebhsayithi, iiblogi, iingxoxo, i-wikis, kunye neendawo zokudibanisa iinkonzo ze-imeyile, ikhalenda, ukuhamba komsebenzi, njl.
OpenACS (Amalungu e-2207)
IiNkqubo zoPhuhliso lweeNkqubo zoVulekileyo (i-OpenACS) sikhokelo sophuhliso ekudaleni izicelo zewebhu ezixhasa uluntu oluqhelekileyo.
ASES (Amalungu e-2777)
I-ASES isixhobo sokuhlalutya, ukulinganisa nokulungisa ukufikeleleka kwamaphepha, amasayithi kunye namaziko, kunye nexabiso elikhulu kubaphuhlisi kunye nabavakalisi.
WebIntegrator (Amalungu e-7680)
I-Webintegrator yindawo evelisa kakhulu ukuphuhliswa kwezicelo zewebhu kwiJava, nto leyo eyenza lula ukusebenzisa nokukhawulezisa ukufunda kwabaphuhlisi bezobuchwepheshe.
EdiTom (Amalungu e-4560)
Ukuvumela abaqalayo ukuba babe nesixhobo sokwakhiwa kwezandi, bawamela kwifom ecacileyo, bhala umculo kunye nemisindo, isofthiwe iyadingeka ukuwanelisa ezi ndawo.
KyaPanel (Amalungu e-2984)
I-KyaPanel yinkqubo yolawulo lwe-imeyile ye-imeyile nge-Postfix, i-LDAP ne-Courier.
Ginga (Amalungu e-12,591)
I-Ginga ingqamaniso yesofthiwe ephakathi (i-middleware) evumela ukuphuhliswa kwezicelo ezibandakanyekayo zethelevishini yedijithali, ngokuzimela kubenzi be-hardware yeqonga lokufikelela kwii-terminals (i-box-top boxes).
Cortex (Amalungu e-1396)
I-Cortex isisakhelo sokuphuhliswa kwezicelo ze-desktop-platform kwi C ++.
SIGATI (Amalungu e-3547)
SIGATI sisixhobo womzobo ukuba uyagxininisa kwi ujongano kulawulo olunye ezisasaziweyo ulawulo inkonzo ngokusekelwe OpenLDAP, nto leyo evumela ulawulo bezinto, izahlulelo, imifanekiso, imizobo kunye ngoluhlu lolawulo lonikezelo.
FormDin (Amalungu e-2500)
I-FormDin isakhelo se-PHP sokuphuhlisa izicelo zewebhu.
Demoiselle (Amalungu e-1229)
Isikhokelo seDemoiselle yi-API yeJava ekuphuhlisweni kwezicelo ze-JEE, ezenziwe yiNkonzo ye-Federal Data Processing Processing (Serpro) kwi-2008 kwaye iphapashwa njengeprogram ekhululekile ngo-Apreli ka-2009.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Umbono ojoliswe kwiprojekthi kunye necandelo elinqunywe nge-AutoCAD 2013
Post Next Incwadi yokuHlola yokuKhuphelaOkulandelayo »